सगुन सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सगुन सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी
डिसी नेपाल , १५ आश्विन २०७५
सगुन (www.sagoon.com) अमेरिकामा दर्ता भएको सोसियल कमर्श साइट हो जसमा सोसियल मिडिया र इकमर्श दुवैको सुविधा एउटै प्लाट फर्ममा उपलब्ध हुनेछ । (BuildingaRewarding Llife Through the Innovative Social Path: Connect. Share. Earn' Wo]o -Mission) रहेको सगूनले अमेरिकी सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज कमिशन (US Security Exchange Commission - SEC) बाट स्विकृत प्राप्त गरि गत वर्षको जुलाई देखि मिनि आइपीओ मार्फत सगुनमा लगानी खुल्ला गरेकोमा यहि जुलाई २६ देखि यो अवसर बन्द भइसकेको छ । हाल अमेरिकाको लागि मात्र Start Engine को प्लेटफर्म मार्फत लगानी गर्न पाइनेछ ।
२) मिनि आइपीओ के हो ?
सन २०१२ मा ‘जब्स एक्ट’को नामले अमेरिकामा मिनि आइपीओको प्रावधान खुल्ला भएको हो। यस भन्दा अगाडि ‘इनोभेटिभ आइडिया’ सहित स्थापना भएका शुरुवाती अवस्थाका कम्पनीहरुमा धेरै आम्दानी हुने वा ठूला कम्पनीहरुले मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सर्वसाधारणहरुले लगानी गर्न पाउँदैनथे।
यहि कुरालाई मध्य नजर गरेर जब्स एक्ट ल्याइएको पाइन्छ। जसको प्रावधान अनुसार ठूला कम्पनीहरु शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा पुरा गर्नु पर्ने सबै प्रावधान पुरा गर्नु पर्ने तर शेयर बजारमा नगइ कम्पनीको स्वामित्व शेयर (इक्युटी शेयर) विक्री गरि सर्वसाधारण लगानी कर्ताहरुबाट कम्पनीले आवश्यक रकम जम्मा गर्न पाउँछन् जसलाई ‘मिनी आइपीओ’ नामले चिनिन्छ। छोटकरिमा भन्नु भन्दा मिनी आइपीओ, स्टार्ट अप कम्पनीहरुर्मा साना लगानी कर्ताहरुले लगानी गर्न पाउने अनुपम अवसरको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम पनि हुन्छ। तर कम्पनी सफल हुंदा अन्य सफल कम्पनीमा गरेको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भन्दा यसबाट प्राप्त हुने फाइदा अत्यन्तै धेरै हुने प्रमाणित भइसकेको छ।
३) स्टार्टअप कम्पनीको शेयर र स्टक मार्केटमा पाइने शेयरमा के फरक छ ?
सिद्धान्ततः दुबै उस्तैउस्तै हुन् तर यिनीहरुको बीचको तात्विक अन्तर भनेको कम्पनी कुन अवस्थामा (Stage) भएको बेलामा शेयर किन्ने भन्ने मात्र हो । अर्थात Time Factor महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई बुझ्न हामीले थाहा भइरहेको फेसबुक कम्पनीको उदाहरण हेरौँ : फेसबुक सन् २००४ तिर स्टार्टअप कम्पनीको हैसियतमा नै थियो । यसको आफनै प्रशस्त लगानी थिएन।
प्रयोगकर्ता पनि थोरै थिए । अर्थात अहिलेको सगून जस्तै अवस्था थियो । त्यसबेला फेसबुकले आफ्नो शेयर सस्तोमा बेच्थ्यो तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न पाउने प्रावधान नै थिएन । सन २००४ तिर एक डलरमा बेचेको फेसबुकको शेयरको मूल्य अहिले बजारमा १२०० डलर भन्दा बढी पर्छ । अर्थात त्यहि शेयरलाई टुक्रयार २०१२ देखि फेसबुकले सार्वजनिकरुपमा आइपीओ मार्फत शेयर विक्री गरिरहको छ। जसको मूल्य प्रति शेयर २०० को हाराहारी छ। अर्थात शेयरको मूल्य शुरुको अवस्थामा जति छिटोछिटो बढछ्, कम्पनी ठूलो हुंदै गएपछि र जोखिम कम हुँदै गएपछि त्यति नै रफतारमा शेयरको मूल्य बढ्दैन। यसरी फेसबुक स्टार्टअप कम्पनी भएको बेलामा शेयर किन्नेहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भए।
सगून अहिले स्टार्टअप कम्पनी हो । त्यसैले यसको शेयर मूल्य पनि कम छ । सगून सफल भएपछि फेसबुकको शुरुका दिनका लगानी कर्ताले १ को १२०० भन्दा बढी प्रतिफल पाए जस्तै सगूनका लगानी कर्ताले पनि प्रतिफल पाउछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस्तो प्रतिफलको Scale फेसबुकको भन्दा धेरै वा थोरै वा उस्तै कुनै पनि हुनसक्छ।
स्टार्टअपमा शेयर हाल्न पाइयो र त्यो कम्पनी सफल भयो भने लागनीकर्ताले पाउने प्रतिफल अथाह वा ठूलो धनराशीको हुनसक्छ। तर यो पनि विर्सन हुन्न कि लगानी आफैंमा जोखिम हो । लगानीमा जोखिम र फाइदा सिक्काको दुइवटा पाटा जस्तै भएर संगै हिँड्छन्।
४) स्टार्टअपमा कति लगानी गर्ने होला ?
जसले जोखिम मोल्न बढी रुचि राख्छ, उसले अलिक बढी लगानी गर्नसक्छ । जसले कम जोखिम मोल्न चाहन्छ, उसले कम लगानी गर्छ । जोखिम मोल्न नचाहनेहरुका लागि यो टन्टाको विषय नै भएन । तथापी विवेकशील भएर निर्णय गर्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने लगानीमा नोक्सान नै भयो भने पनि ठूलो पछुताउ नहुने प्रकारको रकम लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
मीनी आइपीओ मार्फत सगुनमा लगानी गर्ने कुरो माथि भनिए झैँ लगानी कर्ताको आर्थिक क्षमता, जोखिम बहन गर्न सक्ने तत्परता नै मुख्य आधार हुनसक्छ । हाल सगुनमा न्यूनतम १०१२ अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम लगानीको हकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आफनो बार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउछन्।
सो भन्दा बढि लगानी गर्नको लागि सेक्युरिटि एक्सचेञ्ज कमिशनले तोकेको निश्चित सर्त पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। सगुन जब शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्छ तब लगानीकर्ताहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् । सन् २०२२/२०२३ तिर सगुन शेयर बजारमा जाने हालको तयारी र योजना रहेको छ।
६) सगुनको हालको अवस्था कस्तो छ ? यसका प्रोडक्टहरु कस्ता छन्, र भविष्यमा कस्ता आउँदैछन् ?
- सगुन एप – (Android Operating System)
- तीन वटा मुख्य एप्लीकेशनहरुः 'My Day' 'Mood Talk' 'Secret Message' साथमा Me Page'
- ३० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु ।
- ४००० भन्दा बढि लगानीकर्ताहरुले शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेका।
- भारतका श्रद्धा कपुर, मन्दिरा बेदी जस्ता चर्चित सिने कलाकारहरुले समर्थन तथा लगानी गरेको
- भारतको आइआइटी दिल्ली विश्वविद्यालयसंग अनुसन्धान र विकासको लागि सम्झौता भएको – विश्वका ठूला आइटी कम्पनीहरुमा काम गरिसकेका दक्ष प्राविधिकहरु सहितको प्राविधिक टिम भएको – IOS एप केहि महिना भित्रै उपलब्ध हुने।
- सामाजिक सञ्जाल र इकमर्शको क्षेत्रमा ‘ Game Changer' को रुपमा 'Social Smart Card' को बेटा भर्सन २०१९ मा बजारमा आइपुग्ने योजना रहेको ।
७) सगुनमा किन लगानी गर्ने ?
स्टार्ट अप कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर विशेष गरि नेपालीहरुले विगतमा कहिल्यै पनि पाउन सकेका थिएनन्। सगुनले यो अवसर ल्याएको छ। स्टार्ट अप कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम छ। तर जोखिम नै भए पनि आफूलाई ठूलो असर नपुग्ने सम्मको थोरै रकम लगानी गर्दा स्टार्ट अप कम्पनी सफल हुंदाको अवस्थामा प्राप्त हुने प्रतिफल अति उच्च हुने।
हालसम्म उपलब्ध भएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल र इकमर्शका साइटहरु कुनैले पनि आफ्ना प्रयोग कर्ताहरुलाई कम्पनीले गरेको मुनाफाको हिस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छैनन। तर सगुन त्यो पहिलो कम्पनी हुनेछ जसले आफना प्रयोगकर्ताहरुले सगुन प्रयोग गरेबापत कम्पनीलाई दिलाएको फाइदाको ५ प्रतिशत रकम प्रयोगकर्तालाई नै उपलब्ध गराउने योजना रहको। यसले गर्दा यसको प्रयोगकर्ताहरुको सँख्या बढ्नेहुन्छ । फलस्वरुप हाल लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको शेयरको मूल्य बढ्छ।
सगुनले ल्याउन लागेको सोसियल स्मार्ट कार्ड मार्फत हरेक प्रयोगकर्ताले उपहार आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् भने सोहि कार्ड मार्फत सामान खरिद पनि गर्न सक्नेछन् । यी कृयाकलाप गर्दा तत्कालै छुट पाउने र त्यसबापत कम्पनीलाई हुने फाइदाको निश्चित प्रतिशत प्रयोगकर्तालाई नै उपलब्ध गराउने । यसरी सगुन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्तालाई दोहोरो आर्थिक फाइदा हुनेछ जुन हालसम्म कसैले पनि गरेको छैन। नेपालीले शुरु गरेको सगुनको सफलतासंगै विश्वभर रहेका नेपाली र नेपालको सम्बृद्धि र पहिचानमा बृद्धि हुने Ecommerce को ठूलो बजार दक्षिण एशियामा रहेको, ठूला कम्पनीहरुले हालसम्म पनि उक्त बजारमा प्रवेश गरिनसकेका तर सगुनले सोहि क्षेत्रलाई आफ्नो आधार क्षेत्र बनाइ विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने योजना सहित काम शुरु गरिसकेको।
८. मिनी आइपीओ बन्द भएपछि पनि सगुनमा लगानी गर्न पाइन्छ ?
मिनी आइपीओ बन्द भइसकेपछि यस प्रावधान मार्फत सगुनमा लगानी गर्न पाइदैन। तर अमेरिकाका Texas, Florida, Arizona, North Dakota राज्यहरुबाट सम्वन्धित राज्यहरुको कानूनी प्रावधानका कारण मिनी आइपीओ मार्फत लगानी गर्ने अनुमति थिएन । खुशिको कुरो, हालै सगुनले ती राज्यहरुबाट समेत लगानी गर्न पाउने अनुमति प्राप्त गरेको छ। सगुनको 'Fund Raising Partner 'Start Engine' को प्लेटफर्म मार्फत उल्लेखित राज्यहरुबाट लगानी गर्न सकिनेछ। विशेष गरि उल्लेखित ४ वटा राज्यहरुको लागी अनुमति प्राप्त भएको भएता पनि Start Engine को प्रावधान अनुसार अमेरिकाका जुनसुकै राज्यहरुबाट समेत लगानी गर्न पाइने छ। तर यो अवसर अमेरिका बाहिरका कुनै पनि देशको लागि भने उपलब्ध छैन।
अमेरिकाको लागि मात्र उपलब्ध यस अवसर मार्फत लगानी गर्दा कम्तिमा अमेरिकी डलर १०१२ (४४ शेयर, २३ अमेरिकी डलरको दरमा) लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रावधान अनुसार बढिमा एक मिलियन डलरसम्म मात्र लगानी उठाउन पाइने भएकोले सो रकम बराबरको शेयर विक्री हुने वितिक्कै अन्तिम समय भन्दा अगाडि नै यो अवसर बन्द हुनेछ। यस प्रावधान अनुसार लगानी गर्नको लागि https://www.startengine.com/sagoon क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ।
९) स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसरको सदुपयोग गरौँ
विगत १० वर्ष देखि ३०/३५ वर्षको आइटीको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेका आइटीका ठूलाठूला हस्तीहरु जस्तै Facebook, Alibaba, Ubar, Google, Twitter, Amazon आदि सबै स्टार्टअपको अवस्थाबाट गुज्रेर आएको थाहा हुन्छ। जब ती स्टार्टअपमा सफलताको सम्भावना देख्न थालियो, ठूलाठूला लगानीकर्ताहरुले अनि धनी बैङ्कहरुले लगानी गरे। फेसबुकमा १ को १२०० बनाउनेहरु तिनै ठूला लागनीकर्ताहरु र बैंकहरु नै थिए। त्यसबाहेक फेसबुकमा काम गर्ने केही कर्मचारी र दुःखका बेला साथ दिने साथीभाइ र आफन्तहरु थिए।
त्यसैले जसले स्टार्टअपको आधारभूत प्रावधानलाई बुझेका छन्, उनीहरु सगूनमा लगानी गर्न आउँछन्, आइरहेका छन। अमेरिकामा जो सुकैले पनि लगानी गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा तपाइको लगानी गर्ने इच्छा छ भने अथवा पहिला छुट्नुभएको छ भने अहिले नै निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
लगानीको लागिः https://www.startengine.com/sagoon (अमेरिकाबाट मात्र लगानी गर्न पाइने)